२ बर्षदेखि तलवबिहिन क्रिकेट खेलाडी, अाधिकारीक निकाय अाउँछ र पाउँला भन्ने अाशामा दिन बित्दै | | Neplays.com
२ बर्षदेखि तलवबिहिन क्रिकेट खेलाडी, अाधिकारीक निकाय अाउँछ र पाउँला भन्ने अाशामा दिन बित्दै
Nepal Cricket Training-7
नेप्लेज । मिती जनवरी, २०१५ अर्थात करिव तीन वर्ष अघि । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय टिममा परेका र पर्नसक्ने २२ जना खेलाडीसँग सेन्ट्रल कन्ट्रयाक्ट गर्यो । खेलाडीलाई चार बर्गमा बाढेर उनीहरुको अनुभव र योगदानका आधारमा खेलाडीलाई क्यानले सम्झौता गरेको थियो । त्यो सम्झौता भएको चार बर्ष पुग्न करीव डेढ महिना बाँकी छ ।
यतिबेला न त त्याे सम्झौता कायम छ, न त खेलाडीलाई सम्झौता गर्ने संस्था नै अस्तित्वमा । यो विचमा खेलाडीले एक पटक आर्इसीसीबाट नै केहि रकम तलवको रुपमा पाए । तर पछिल्लो २० महिना देखि क्रिकेट खेलाडी तलव विहिन छन, अझै भनौ उनले सम्झौताबाफत पाउनुपर्ने रकम पाउन सकेका छैन ।
नेपालमा कुनैपनि खेलाडी त्यती धनी छैनन की उनीहरुले नियमित तलव नपाएपनि काम चलाउन सक्छन ।
पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, बसन्त रेग्मी, शक्ति गौचन, शरद भेषवाकर, सुवास खकुरेल
सोमपाल कामी, सागर पुन, नरेश बुढाऐर, अमृत भट्टराई, विनोद भण्डारी, भुवन कार्की
जितेन्द्र मुखिया, अनिल मण्डल, आरिफ शेख, राहुल विश्वकर्मा, प्रदिप ऐरी, महबुब आलम
करण केसी, राजेश पुलामी, रामनरेश गिरी, राजु रिजाल
ती २२ जना खेलाडीमा अहिलेको अवस्थामा धेरै परिमार्जन भइसक्नु पर्ने हो । यो लिस्टमा रहेका मध्ये अमृत भट्टराई नेपाली क्रिकेटबाट अलग्गिसकेका छन् भने राहुल विश्वकर्मा टिममा नपरेको लामाे समय वितिसक्याे । यस्तै अनिल मण्डल पनि पछिल्लो पटक राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउन सकेका छैनन् ।
प्रदर्शनकै अाधारमा पनि घ श्रेणीका करण केसीको बढुवा हुनुपर्ने थियो ।
हाल राष्ट्रिय टिममा रहेका खेलाडी जो या लिस्ट छैनन् उनीहरुलाई समायोजन गर्नुपर्ने त्यो पनि हुन सकेको छैन । निरन्तर पहलको अभाव कुनैपनि खेलाडीका बारेमा मतलव गर्ने संस्था नै अस्तित्वमा छैन, जुन संस्थाले खेलाडीलाई समयमै सुविधा दिने दुःखमा साथ दिन हो त्यो नै नरहेपछि बाँकी कुरा के अर्थ ?
तर पछि क्यान नभएपनि नेपालमा क्रिकेट चलिनै रहेको छ, कुनै न कुनै रुपले । ती खेलाडीको तलवका लागि हात अगाडी सार्ने अर्को पक्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि हो । उसले आफैले तलव नदिएपनि आर्इसीसीबाट त्यसको समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने हो त्यो पनि हुन सकेको छैन ।
खेलाडीको तलवका लागि, अनि क्यानकाे विवाद समाधानका लागि, आर्इसीसीका प्रतिनिधी बारम्बार नेपाल अाइरहेका छन् । तर, उनीहरु पनि विभिन्न बाहनामा कुरा टार्दै आएका छन । कहिले संघको निलम्बन फुकुवा भएपछि त कहिले चाँडै हुन्छ भनेर यो विषयलाई टार्दै आएका छन ।
कसरी चलेका छन् नेपाली क्रिकेटर ?
नेपाली राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने खेलाडी जतिपनि खेलाडी छन्, उनिहरु सबैकाे हैसियत फरक फरक छ । कतिपय खेलाडी काठमाडौमा घर भएका होलान वा भाडा तिर्नु नपर्ने हुनसक्छ । तर काठमाडौ बाहिरबाट आएका खेलाडीका लागि याे अवस्था कठीन छ ।
नियमित आउने रकम नआउँदा खेलाडीको मर्का कसले बुझोस ? यतिबेला नेपालमा एकपछि अर्को फ्रन्चाइज प्रतियोगिता भइरहेकालेपनि खेलाडीहरुलाई सस्टेन गर्ने केहि सजिलो भएको छ । तीन प्रतियोगिताबाट टिमबाट आएको रकमले उनीहरुले आफ्नो दैनीकी चलाइरहेका छन ।
त्यो बाहेक उनीहरुले कुनै टुर जाँदा दिनको ५० डलर भत्ता पाउछन । त्यसबाट उनीहरुले खेल भएको दिन साँझको खाना र खेल नभएको दिन दुबै छाक खाना खानुपर्ने हुन्छ । कुनैपनि टुरबाट फर्किदा जति पनि रकम खेलाडीले बचाउछन त्यो त कति नै हुन्छ र ? नेपाली क्रिकेटमा केहि खेलाडी मात्र छन् जो कुनै न कुनै कम्पनीसँग आबद्ध छन । चाहे त्यो ब्रान्ड एम्बेस्डर होस या विज्ञापन खेलेर । तर ती सबै कम्पनीले पनि तोकेको समयमा रकम खेलाडीलाई दिदैनन् ।
खेलाडीलाई कुनै न कुनै कम्पनीमा आबद्ध गराउने भनेर तामझामका साथ एक निजी कम्पनीले कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यसबाट केहि खेलाडी विभिन्न कम्पनीमा आबद्ध पनि भएका थिए । तर उनीहरुले ६ महिना हुँदासम्म पनि आफुले पाउनु पर्ने रकम पाउन सकेका थिएनन् । अहिले खेलाडीहरुलाई अनुबन्ध गराउने कम्पनी खेलाडीका बारेमा कुनै चासो दिएको छैन ।
क्यान निलम्बनमा परेपछि नेपाली क्रिकेट पुर्ण रुपमा आर्इसीसीमा निर्भर छ । कुनैपनि प्रतियोगिताका लागि तयारी गर्नुपर्दा आर्इसीसीले कहिले बजेट पठाउँछ र सुरू गराैंला भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता नेपाली क्रिकेटकाे वर्तमान कटुसत्य हाे । क्लाेज क्याम्पका बेला पनि खेलाडीले अाफुलार्इ चाहीने न्युट्रिसन हाेइन, बजेटकाे अाधारमा खानु पर्ने अवस्था छ ।
आर्इसीसीले नेपाललाई लचिलो रुपमा लिएको भन्ने भनाईपनि नेपाली क्रिकेटमा धेरै छन । तर जुन ब्यवहार आर्इसीसीले नेपाललाई देखाएको छ त्यसमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक पक्ष धेरै छन । चाहे त्यो नेपालमा कुनै अन्तराष्ट्रिय खेल गर्दा होस या आर्इसीसीले टिमका लागि कुनै सल्लाहकार पठाउँदा । नेपाली खेलाडी प्रशिक्षकले चाहेको समयमा रकम नपाउँदा आर्इसीसीबाट आएका सल्लाहकारले आफ्नो काम सकेर गएको अर्को दिन रकम पाउछँन । यसबाट आफै अनुमान लगाउन सकिन्छ, हविगत ।
कहिले होला निकास ?
नेपाली क्रिकेटले अहिलेसम्म जुन सफलता हात पारेको छ त्यो सफलता दिलाउने खेलाडीको एक फेजको खेल्ने समय अब धेरै बाँकी छैन । किनकी बढ्दो उमेरले उनीहरु चाँडै नै सक्रिय खेलाडी जीवनबाट टाढा हुने निश्चित छ । अहिलेको राष्ट्रिय टिमका सिनियर खेलाडीहरुले अब धेरै खेलमा ३ देखि ४ बर्ष हो खेल्ने । त्यसपछि युवा खेलाडीले नै नेपालको क्रिकेटलाई धान्नुपर्ने हो । तर ती युवा खेलाडीलाई जुन हौसला दिन र जिम्मेवारी बोध दिलाउन अझै पनि नेपाल सरकार र नेपाली खेलकुदकाे बागडाेर सम्हालिरहेकाे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् चुकेको छ ।
भलै केहि युवा खेलाडी जो अहिलेका सिनियर खेलाडीको लेभलमा आएको जस्तो देखिएपनि त्यो कतिसम्म सहि हो त्यसको लेखाजोखा गर्ने वातावरण छैन । नेपाली क्रिकेटमा एउटा सिस्टम नहुँदासम्म कुनैपनि खेलाडी आफुलाई ढुक्क सोच्न सक्दैन, त्यो अहिले नेपालमा छ । चाँडै क्यानको विवाद समाधान भएर निलम्बन फुकुवा भर्इ नयाँ क्रिकेटको सिस्टन नेपालमा कहिले आउला भनेर खेलाडीमात्र होइन क्रिकेट समर्थकपनि कुरिरहेका छन । तर एक दिन दुई दिन भन्दा भन्दै बर्षाै वित्दापनि अझै समाधानको ढोका खुल्न सकेको छैन ।
स्वर्गिय सेतेदाईलाई महेश र नरेशकाे सहयाेग
ठोस सवुत नभेटिएपछि २०११ विश्वकप फाइनलको म्याच फिक्सिङ जाँच बन्द
पहिलो टेस्टमै पहिलो शतक बनाउने खेलाडी चाल्स बेनरम्यान